Trano miakatra avo - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Ny fananganana rafitra vy dia karazana rafi-pananganana vaovao, izay manokatra ny fetra indostrialy eo amin'ny indostrian'ny trano, indostrian'ny fananganana ary ny indostrian'ny metallurgy ary miditra amina rafitra indostrialy vaovao. Io no rafitra fananganana vy izay ankasitrahan'ny indostria amin'ny ankapobeny.
Raha ampitahaina amin'ny tranobe vita amin'ny beton nentim-paharazana, ny tranon'ny firafitry ny vy dia manolo ny beton nohamafisina amin'ny takelaka vy na vy vita amin'ny vy, izay manana tanjaka avo kokoa sy mahatohitra fanoherana tsara kokoa. Satria ny singa dia azo amboarina ao amin'ny orinasa ary apetraka eo an-toerana, dia nihena be ny vanim-potoana fananganana. Noho ny fampiasana ny vy azo ampiasaina indray dia azo ahena be ny fako amin'ny fananganana ary maitso kokoa izy iosariaka amin'ny tontolo iainana, noho izany dia be mpampiasa amin'ny tranobe indostrialy sy tranobe sivily manerana an'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao, ny fampiharana tranobe mirindra amin'ny trano avo sy avo lenta dia mihamatotra ary lasa tsikelikely ny haitao fananganana lehibe, izay làlana fampandrosoana ny trano ho avy.
Ny fananganana firafitra vy dia rafitra mitondra enta-mavesatra vita amin'ny vy fananganana. Rantsana, tsanganana, trusses ary singa hafa mazàna vita amin'ny takelaka vy sy vy no mamorona rafitra mitondra entana. Izy io dia mamorona trano feno miaraka amin'ny tafo, gorodona, rindrina ary rafitra hafa.
Ny vy vita amin'ny fananganana trano mazàna dia manondro vy miolikolika mafana, vy vy, fantsom-boaloboka, H-andry ary fantsona vy. Ireo tranobe misy firafitra mitondra enta-mavesatra misy ny singa ao aminy dia antsoina hoe tranobe mirafitra vy. Ho fanampin'izany, ny takelaka vy misy rindrina matevina toy ny endrika L, miendrika U, miendrika Z ary tubular, izay mangatsiaka mihodina avy amin'ny takelaka vy manify ary mikitroka na tsy mikimpy, ary ireo tranobe manana rafitra mitondra entana namboarin'izy ireo sy ireo singa vita ny takelaka vy kely toy ny vy vy sy zoro vy dia matetika antsoina hoe tranobe mirindra. Misy koa ny rafitra tariby mihantona miaraka amin'ny tariby vy, ary misy ihany koa ny rafitra vy.
Ny vy dia manana tanjaka avo sy modulus elastika, fitaovana fanamiana, plastika tsara sy henjana, fahamendrehana avo lenta, fametrahana mora, ambaratonga avo amin'ny indostrialy ary fananganana haingana.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana, eo amin'ireo haitao sy fitaovana efa misy, ny firafitra vy, ho toy ny rafitra mitondra entana ho an'ny trano, efa lavorary sy matotra hatrizay, ary efa ela no fitaovana fananganana mety.
Ireo trano mihoatra ny gorodona na haavo maromaro dia ho lasa trano avo be. Ny haavon'ny fanombohana na ny isan'ny gorodon'ny tranobe avo dia miovaova arakaraka ny firenena, ary tsy misy fenitra hentitra sy hentitra.
Ny ankamaroan'izy ireo dia ampiasaina amin'ny hotely, tranobe birao, toeram-pivarotana ary tranobe hafa.
Hopitaly momba ny reny sy ny zaza
Trano University University